OTU ESI EWEPU AKWUKWO OGUGU ITUNES - ITUNES - 2019
Otu esi ewepu akwukwo ogugu iTunes
Ụfọdụ ndị na-ebi akwụkwọ na scanners nwere ike ịrụ ọrụ na ọkwọ ụgbọ ala, nke arụnyere na ndabara na nsụgharị ọhụrụ nke Windows, ma maka ihe ndị ọzọ dịka Epson Stylus TX210, ị ka nwere mkpa iji wụnye ngwanrọ ọrụ. Ọzọ anyị na-ele anya ụzọ nke ịchọta na ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ a kapịrị ọnụ.
Ọkwọ ụgbọala nchịkọta maka Epson Stylus TX210.
Igwe a na-ewere dị ka MFP bụ ngwaọrụ dị ọhụrụ, n'ihi ya, a tọhapụrụ otu onye ọkwọ ụgbọala maka ya, ọ bụghịkwa ichewa software maka akụrụngwa ọ bụla. N'ihi ya, a na-eme ka ọrụ ịchọta ma wụnye ngwanrọ dị mfe.
Usoro 1: Ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta ndị ụlọ ọrụ
Usoro kachasị mfe ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala maka ọtụtụ ngwaọrụ bụ ịga na ebe nrụọrụ weebụ nke onye nrụpụta, gaa na mpaghara nbudata ma budata ihe ndị dị mkpa. Nkwupụta a bụ eziokwu n'ihe banyere Epson Stylus TX210, ma enwere obere nuance - na nsụgharị Russia nke ọnụ ụzọ ámá ahụ enweghị akwụkwọ maka ihe nlereanya a, n'ihi ya, ị ga-eji nsụgharị pan-European.
N'isi isi saịtị ahụ anyị na-ahụ njikọ ahụ "Nkwado" ma pịa ya.
Pịgharịa gaa na ibe ahụ, chọta nchọta ọchụchọ wee banye na ya aha nke ihe achọrọ chọrọ MFP - Stylus TX210. Usoro a ga - egosipụta nsonaazụ dị na mpempe akwụkwọ nchịkọta nhọrọ, nke na - pịa na achọrọ.
Ọzọkwa ị ga-enye gị ịhọrọ asụsụ nke ibe gosipụtara - họrọ "Russian".
Ọzọ, pịa bọtịnụ. "Chọọ".
A ga-agbanye ebe a na-eji ngwa ngwa. Algọridim na saịtị adịghị mgbe niile na-ekpebi ụdị nsụgharị na bitation nke sistemụ arụmọrụ, ya mere jiri ndepụta ọdịda aha "Ànyị marala usoro sistemụ gị n'ụzọ ziri ezi?"nke na-ahọrọ nri kwesịrị ekwesị.
Meghee oghere ahụ "Ndị ọkwọ ụgbọala".
Chọta nsonaazụ ngwanrọ kachasị ọhụrụ wee pịa aha ya.
Na-agụ ihe ngwugwu ngwugwu na pịa "Download" ịmalite ibudata.
Download onye nhazi na komputa gi, wee gbaa. Na mpio mbụ, pịa "Mbido".
Na-esote, họrọ ezigbo ihe nlereanya nke MFP - ọ dị na nri.
Lelee ma ọ bụrụ na edepụtara asụsụ Russian dị ka ndabara, ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, họrọ ya na menu ndọpụta, wee pịa "OK".
Gụọ ma kwenye na nkwekọrịta ikike site na ịpị "Nabata".
Usoro nhazi ngwa software amalite. Chere ruo mgbe agwụchara, wee malitegharịa kọmputa ahụ.
Mgbe usoro a gasịrị, a ga-arụ ọrụ ọkwọ ụgbọala ahụ, MFP ga-arụ ọrụ nke ọma.
Ụzọ kachasị mfe bụ ịwụnye ngwa Epson nwere ikikere, ọrụ nke iji wụnye mmelite dịgasị iche, gụnyere ndị ọkwọ ụgbọala.
Epson Utility Download Page
Soro njikọ dị n'elu, pịgharịa peeji nke ma chọta bọtịnụ ahụ "Download" n'okpuru nkọwa nke nsụgharị nke Windows.
Mgbe nbudata zuru ezu, na-agba faịlụ ahụ ma wụnye ngwanrọ na kọmputa gị, na isoro ntuziaka.
Jikọọ MFP na PC, ọ bụrụ na i mebeghị nke a tupu ịmalite Epson Software Updater. Na windo ndị bara uru, họrọ ngwaọrụ.
Ihe bara uru ga-amalite na-achọ mmelite. Na ngọngọ "Imelite Ngwa Ngwa" enwere mmelite dị egwu, na ngalaba "Ngwa ndị ọzọ bara uru" - nhọrọ maka ntinye software. Dọpụ ihe ịchọrọ, wee pịa "Wụnye ihe".
Tupu ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala ahụ, ị ​​ga-achọ ọzọ ịnwe nkwekọrịta ikike - lelee ihe ahụ "Kwekọrịta" wee pịa "OK".
Ejiri ọkwọ ụgbọala na ọnọdụ akpaka - ọ bụ naanị onye ọrụ ka ị ga-emechi usoro ahụ ma malitegharịa kọmputa na njedebe usoro ahụ. N'ihe banyere ịwụnye femụwe, windo ga-apụta na nkọwa ya. Gụ ya nke ọma, wee pịa "Malite".
Ejila MFP mee ihe ọ bụla mgbe ị na-arụ ọrụ ntanetị ahụ, ma kwụpụ ya na netwọk na kọmputa!
Na windo ikpeazụ, pịa "Emecha", mechie usoro ihe omume ahụ.
Usoro a na-eme ka arụmọrụ na nchedo dị, ya mere anyị na-akwado iji ya.
Usoro 3: Mmemme site na ndị mmepe nke ọzọ
Ọ naghị adị mfe mgbe niile iji ụzọ ndị a kọwara n'elu. N'okwu a, ị nwere ike iji ndị ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ zuru ụwa ọnụ site na ndị mmepe nke atọ. Enwere ọtụtụ mmemme nke klas a, mana ha na-arụ ọrụ dịka otu ụkpụrụ ahụ si dị: ha na-eleba ihe ngwaike anya, chọpụta na nchekwa data, wee ibudata ma wụnye ngwanrọ maka ha. Anyị kwadebere nchịkọta nke ngwọta kacha mma nke klas a maka ndị ọrụ na-amaghị ihe ịhọrọ.
Gụkwuo: Ọkwọ ụgbọala kachasị elu
Anyị ga-achọ ịmepụta ọkwọ ụgbọala DriverPack n'etiti ndị niile a tụlere: ngwa a bụ nhọrọ kachasị mma na njirimara na mma. Enwere ike ịchọta ntụziaka zuru ezu maka ịrụ ọrụ na usoro a n'isiokwu na-esonụ.
Ihe Ọmụmụ: Imelite ndị ọkwọ ụgbọala na usoro ihe omume DriverPack Solution
Nhọrọ ọzọ nke na-adịghị achọ ntinye nke ngwanrọ nke atọ bụ ịchọ ndị ọkwọ ụgbọala site na iji njirimara ngwaike pụrụ iche. Maka ngwaọrụ na ajụjụ, ọ dị ka nke a:
USB VID_04B8 & PID_084F
A ghaghị itinye koodu a na ibe ọrụ ọrụ pụrụ iche, nke ga-enye njikọ iji budata nsụgharị ọhụrụ nke software ọrụ maka MFP a kapịrị ọnụ. Enwere ike ịchọta nkọwa gbasara usoro a n'isiokwu na-esonụ.
Gụkwuo: Anyị na-achọ ndị ọkwọ ụgbọala na-eji ngwaike ngwaike
Usoro 5: Windows Toolbar Windows
Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume iji nhọrọ a tụlere n'elu, nkedo nke ngwá ọrụ ahụ ga-apụ. "Onye njikwa ngwaọrụ". Na mgbakwunye na ịlele ngwa ngwa, ngwá ọrụ a nwekwara ọrụ nke ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ọtụtụ ụdị mpempe akwụkwọ.
Otu esi eji Njikwa Task Iji wụnye ngwanrọ ọrụ, ị nwere ike ịmụta site na ntuziaka na-esonụ.
Ihe Ọmụmụ: Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala site na "Task Manager"
Ihe ịchọrọ ịkwọ ụgbọala ise dị n'elu karịa maka Epson Stylus TX210 bụ ndị kachasị ọnụ maka onye ọrụ ọhaneze. Ọ bụrụ na ị maara ndị ọzọ - biko kekọrịta ha na ihe.